चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ लाई आपतकालीन प्रयोगको मात्रै छ अनुमति चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ लाई आपतकालीन प्रयोगको मात्रै छ अनुमति
चिनियाँ खोप ‘भेरोसेल’ लाई आपतकालीन प्रयोगको मात्रै छ अनुमति
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 3/30/2021 08:04:00 am 0
काठमाडौँ— चीन सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप ‘भेरोसेल’ सोमबार बिहान नेपाल आइपुग्यो ।
चीन सरकारको ‘सिनोफार्म’ अन्तर्गतको ‘बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रडक्ट’ कम्पनीले उत्पादन गरेको ‘भेरोसेल’ खोप नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी–३३० जहाजबाट नेपाल ल्याइएको हो ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गरिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप टेकुस्थित स्वास्थ्यसेवा विभागको चिस्यान केन्द्रमा राखिनेछ ।
नेपाल ल्याइएको यो चिनियाँ खोपलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) ले आमप्रयोगको लागि अनुमति दिएको छैन । क्लिनिकल ट्रायलको कागजात बिनै चिनियाँ खोप नेपाल ल्याइएको छ ।
डब्ल्युएचओले आपतकालीन प्रयोगको मात्र मान्यता दिएको यो खोप प्रयोग गर्नु कतिको उपयुक्त होला ?
यस प्रश्नमा खबरहबसँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने, ‘एस्ट्राजेनेकाको कोभिसिल्ड पनि शुरूमा आपतकालीनका लागि मात्र थियो, पछि स्वीकृति दिएको हो । अहिले ल्याउन लागिएको खोप पनि आपतकीलन प्रयोगकै लागि हो, अहिले यो खोप १२ देखि १५ वटा देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।’
डा. गौतमले डब्ल्युएचओको अनुमति नभए पनि खोप प्रगोग गर्न पाइने बताए । उनले भने, ‘उत्पादन गरेको देशले अनुमति दिएर प्रयोग भइसकेको खोप प्रयोग गर्न कुनै कानूनी बाधा अड्चन आउँदैन ।’
उनका अनुसार नेपालले चाँडै यो खोप दिन शुरू गर्नेछ । खोप लगाउने प्राथमिकतामा परेका व्यक्तिको बारेमा निर्णय गरेर खोप अभियान सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
खोप ल्याउनुअघि प्रयोगका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधान छ । चिनियाँ खोपमा औषधि व्यवस्था विभागले पनि आपत्कालीन प्रयोगको मात्रै अनुमति दिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार विभागले अहिलेसम्म भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको ‘कोभिशिल्ड’ लाई मात्रै आमप्रयोगको अनुमति दिएको छ । चीनियाँ खोप भेरोसोल आपतकालीन प्रयोगको अनुमति छ । केसीका अनुसार चिनियाँ खोप क्लिनिक ट्रायलमै रहेकाले मापदण्ड पूरा गरेर मात्र यो खोपको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्ठा अहिले नेपाल आएको चिनियाँ खोपको सबै क्लिनक प्रक्रिया पूरा नभए पनि प्रयोग गर्न उपयुक्त भएकाले आपत्कालीन प्रयोग गर्न पाइने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो खोप प्रयोगमा आए पनि कति प्रभावकारी छ भन्ने आइसकेको छैन, प्रयोगका लागि उपयुक्त भएकाले, यो खोपले असर गर्दैन ।’
कतिपय मुलुकले चिनियाँ खोपले असर निम्त्याएको भन्दै परीक्षणमा समेत रोक लगाइएका छन् । चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको सिनोभ्याक खोपको ब्राजिलमा गरिएको तेस्रो चरणको परीक्षणमा क्रममा ५० दशमलव ४ प्रतिशतमात्रै प्रभावकारी देखिएको जनाइएको थियो । त्यसयता यसको प्रभावकारिता अध्ययनबारे आधिकारिक रिपोर्ट बाहिर आएको छैन ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. अनुप सुवेदीका अनुसार अहिले नेपालमा प्रयोग भइरहेको कोभिसिल्ड र चिनियाँ भ्याक्सिनको संरचना नै फरक छ । उनका अनुसार चिनियाँ भ्याक्सिन भाइरसको समग्र संरचनालाई ‘इनएक्टिभेट’ गरेर बनाइएको हो । यसको प्रभावकारिताको तुलनात्मक अध्ययनबारे केही जानकारी छैन ।
विशेष विमानमा ढुवानी
चीनले अनुदानमा दिएको ८ लाख डोज खोप नेपाल ल्याउन भाडामात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमका अनुसार चिनियाँ खोप नेपाल ल्याउन २ करोड १८ लाख १० हजार रुपैयाँ भाडा लागेको हो ।
चीनले यात्रुबाहक जहाजबाट खोप पठाउन नमानेपछि नेपाल सरकारले चीनबाट खोप ल्याउन विमान नै चार्टर गर्नुपरेको स्वास्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले चीनले खोप अनुदानमा दिएको र नेपालले भाडा व्यहोरेर ढुवानी गरेको बताए । छिमेकी मुलुक भारतले अनुदानमा दिएको कोभिशिल्ड खोप आफैँ नेपाल ल्याइदिएको थियो ।
खोप लैजान दबाब दिएको दियै
नेपाल सरकारले चिनियाँ दूतावासको पटक–पटकको दबाबपछि यो खोप ल्याएको हो । नेपाल सरकारले मागे पनि चीन सरकारले खोपको क्लिनिकल ट्रायलका कागजात उपलब्ध गराएन । बरु, खोप तुरुन्त नलगे पछि उपलब्ध हुन नसक्ने चेतावनी दियो ।
चिनियाँ खोप आपूर्तिका विषयमा प्रश्न उठाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले गत माघमा पत्र पठाएपछि चीनले तत्काल खोप लैजान ताकेतासहितको पत्र पठाएको थियो । खबरहबलाई प्राप्त पत्रअनुसार नेपालले माग गरेको आपूर्ति कम्पनीको कागजात पछि उपलब्ध गराइने तर खोप तरुन्तै लैजानु पर्ने कुरा उल्लेख थियो ।
यस विषयमा चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चेतावनीपूर्ण जवाफ पठाए पनि परराष्ट्रले मागेका कागजात बारे भने कुनै जवाफ दिएन ।
गत माघ १८ गते नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाललाई आफ्नै सरकारी कम्पनी सिनोफार्मले उत्पादन गरेको तीन लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । माघ २३ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चिनियाँ विदेशमन्त्रीबीचको टेलिफोन वार्तामा चीनले थप पाँच लाख डोज खोप दिने भनिएको थियो ।
चीनले नेपाललाई खोप लैजान ताकेता मात्र गरेन, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले यही चैत २ गते विज्ञप्ति जारी गरेर चिनियाँ खोप लगाउनेलाई भिसा दिने नीति पनि सार्वजनिक गर्‍यो ।
दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘दूतावासले ती भिसा आवेदकहरूलाई सहजीकरण गर्नेछ जसले चीनमा निर्मित कोभिड–१९ का भ्याक्सिन लिएको प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिएका हुनेछन् ।’ यसबारे नेपाल सरकार मौन छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म उपलब्ध २३ लाख ४८ हजार मात्रामध्ये १८ लाख मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । बाँकी पाँच लाख ४८ हजार मात्रा र अहिले चीनबाट प्राप्त आठ लाख मात्रा खोप बाँकी छ ।
भारतसँग नेपालले खरिद गरेको सिरम इन्स्टिच्युटको ‘कोभिशिल्ड’ खोपको १० लाख मात्रा आएको छैन । यो खोप कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो छैन । - खबरहब बाट